IGeirangerfjord, ifjord enhle lapho kwaqoshwa khona iThe Wave | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | ENorway, Yini ongayibona
Eyodwa ingaphezu kokujwayela ama-movie ezinhlekelele ukuthi abaseMelika bavame ukuqopha ifilimu. Uma kungenjalo ukuzamazama komhlaba okukhulu, kubafokazi, kepha i-meteorite, kepha isifo se-zombie. Ingqikithi inhlekelele nokubhujiswa nanoma ngubani ongazenzela yena.
Kuyamangaza-ke ukuthi abantu baseNorway bangena ohlotsheni olufanayo lwamafilimu, kepha bakwenzile lokho ngefilimu Igagasi. Sikubone kumatiyetha ngonyaka we-2015 kanti abanye bethu kamuva bakujabulela kwiNetflix, ukubona nje i- inhlekelele evusa amadlingozi ngolunye ulimi ngaphandle kwesiNgisi. Futhi okungenani ngakimi, ukujabulela i- indawo enhle yamafjords aseNorway.
2 Igagasi kanye ne-tsunami engenzeka
3 Vakashela iGeiranger
INorway inama-fjords amaningi amahle kodwa omunye izivakashi kakhulu yilokho. Itholakala eRomsdal County, esifundeni saseMore, futhi cishe 15 amakhilomitha ubude nokuba yingalo yenye i-fjord, iSunnylvsfjorden bese kuthi lena ibe ngeyenye enkulu, iStorfjorden.
Kusukela ngo-2005 kuyigugu Lomhlaba, udumo olwabelana ngayo nenye i-fjord eseduze. Inezimpophoma ezinhle kakhulus njengabadumile Impophoma Yodadewabo Abayisikhombisa. Le yimifudlana eyisikhombisa ehlukene eyakha izimpophoma eziyisikhombisa, ephezulu kakhulu efinyelela kumamitha angama-250. Banalo leli gama elihle ngoba kunenganekwane kubo esitshela ngodade abayisikhombisa abadansa ngaphansi kwentaba ngenkathi bebaqola ngenhla. Enye impophoma edumile yi- Impophoma yaseMonje. Bobabili babhekene.
Ifjord inezindonga zezintaba eziphakeme kakhulu futhi ezicijile ezizungezile nengalo yolwandle incane kakhulu ngakho-ke inhlanganisela iyamangalisa. Uma sengeza izimpophoma lapha nalaphaya kuyamangalisa. Yize kwezinye izikhathi abantu bezinze lapha, ku amapulazi asezintabeni nemizanaNamhlanje baningi abalahliwe.
Abanye bangafinyelelwa ngezinyawo, kulezi hambo ngaphandle ukuthi abantu baseNorway bathanda kakhulu, noma ngesikebhe. Ukuhamba kuyingozi ngoba awekho amabhuloho futhi imizila ivame ukunamathela emaweni aphakeme kakhulu. Ezinye zalezo ezivame ukuvakashelwa ehlobo IKnivsfla, iBlemberg noma iSkagefla. Njengamanje kunesikebhe esihamba ngezintambo esisebenza njengendawo yokuhambela izivakashi egudla umfula phakathi kwezindawo ezimbili zokuhlala ezincane njengeGeiranger neHellesylt.
Igagasi kanye ne-tsunami engenzeka
Ngale kwalokho I-wave iyi-movie isuselwa ezenzakalweni ezingenzeka. Empeleni, umcimbi weqiniso uyalandiswa ekuqaleni okwenzeka ngo-Ephreli 1934. Kwathi-ke, itshe elisuka entabeni empeleni laveza i-tsunami eyabhubhisa idolobhana laseTajford labulala abantu abangaba ngu-40 futhi ngaphambi kwalokho, ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX , kwenzeka okufanayo. Eqinisweni, kuhlala kwenzeka ukuthi kwenzeke futhi.
Iqiniso ukuthi idolobhana elincane laseGeiranger, okuyindawo yezivakashi, lakhiwa ekugcineni komfula osemlanjeni woMfula iGeirangelva. Intaba yase-Akerneset engena e-fjord Kuyabukwa ngaso sonke isikhathi, njengoba sibona kule filimu, ngoba uma ingawa, nakanjani izokhiqiza i-tsunami enkulu ebingabhubhisi idolobha elilodwa kepha eziningana ngemizuzu eyi-10 nje.
Intaba inokuqhekeka okunwebeka ngesilinganiso samasentimitha amabili kuya kwali-15 unyaka ngamunye futhi abayeki ukuzama ukubala ukuthi kungaba kanjani, nini futhi imiphi imiphumela engabonakala kusengaphambili uma amamitha ayi-1500 entaba ehlukaniswa nomfula.
Izazi zesayensi yokwakheka komhlaba zilinganisela ukuthi uma ukudilika komhlaba kwenzeka cishe kungaba ama-cubic metres ayizigidi ezingama-50 (kabili ukudilika komhlaba okubili kwekhulu lama-XNUMX): amadwala angena ngqo emanzini e-fjord angadala igagasi elikhulu, i-tsunami, engamamitha angaba ngu-30 ukuphakama lokho kungabhubhisa lonke ugu kusengaphambili.
Iqembu lezakhiwo ezingabonakala buqamama liyashayisa, futhi kunjalo phambilini bekukhona ipulazi lapha namuhla elilahliwe. Indawo iyamangalisa futhi igcinwe ngoba imele okuthile okujwayele impilo enzima emifuleni, kepha iqiniso ukuthi indawo iyesabeka impela: ibuhlungu ngamanzi kuphela, ingamamitha ayi-100 kuphela ngaphezu kogu lolwandle Ummango osezingeni eliphansi ongahlaselwa yizikhukhula zeqhwa ... Yize abakhi bawo bekubhekele lokhu futhi kubhekwa nokuthi uphahla lwezakhiwo lusezingeni eliphezulu kangakanani emthambekeni ukuze igebe elingaba khona ligudle kuzo, kusabeka .. .
Konke lokhu kuyengeza kubhayisikobho yezinhlekelele ngakho-ke elinye lamahithi asemabhokisini akamuva eNorway lazalwa (laze lakhethwa ukuba lethulwe njengeBest Foreign Film for the Oscars…). I-movie iqoshwe eGeiranger nengxenye yangaphakathi kuma studio aseRomania. Ukutshalwa kwemali bekucishe kube yizigidi eziyisithupha zama-euro futhi uma sicabanga ukuthi eNorway ithengise amathikithi ama-movie angama-30% ngaphezulu kuneJurassic World ... kube yimpumelelo!
Uma uyithandile i-movie kuleli hlobo ungavakashela ama-fjords aseNorway. Itheku laseGeiranger lichweba lesithathu ngobukhulu eNorway futhi ngenkathi yezinyanga ezine zezivakashi ithola kusuka emikhunjini eyi-140 kuya kwayi-180.
Abantu abangama-250 abantu abazinzile bendawo kodwa ehlobo kufika izivakashi ezingaphezu kwezinkulungwane ezingama-300 kuzo zonke lezo zinyanga ezifudumele. Kunokunikezwa okuhlukahlukene kokuhlala, kokubili kusuka amahhotela ezinkanyezi ezinhlanu njengoba kwe ikamu, ngakho-ke ungakhetha ukuthi uzolala kuphi ngokuya ngephakethe lakho. Ufika kanjani lapho? ufasimbe olwandle kuyinketho: i-Hurtigruten iyindlela yasogwini exhumanisa iBergen neGeiranger.
Ungase futhi ufike Ngezindiza kusuka ezweni lonke noma ngebhasi kusuka eBergen, Oslo noma eTrondheim. Futhi ungathatha isitimela esisuka e-Oslo yize lolu hambo lucishe lube amahora ayisithupha. Ukusuka eTrondheim kuthatha okuncane kepha kufanele njalo uthathe ibhasi ukhuphuke ngomgwaqo wezintaba ukuze ekugcineni ufike lapho. Futhi yimiphi imisebenzi yabavakashi ongayenza?
Ungakwenza i-kayaking, kuma-catamarans asheshayo futhi ahlabayo, hamba izintaba, hamba ngesikebhe futhi ujabulele ilanga laseNyakatho Yurophu elikhanya kuphela lokhu kukhanya ehlobo. Futhi kufanele ukuthi, kuyindawo enganyamalala nganoma yisiphi isikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » ENorway » UGeirangerfjord, umfula omuhle lapho kwaqoshwa khona iThe Wave
Ngiyethemba ukuthi akwenzeki njengenhlekelele yeDamu laseVajont e-Italy, ibhayisikobho iyinto enhle kakhulu eyenzeke lapho empeleni.
Amabhishi ayishumi ahamba phambili emhlabeni ngo-10
ICalanque D'En Vau, emaphethelweni eMarseille